Hamro Doctor News | Hamro Doctor
क्यान्सर निवारण अभियन्ता जस्ले क्यान्सरकै कारण बाबु गुमाए
क्यान्सरअर्थात अर्बुद रोग निवारणको क्षेत्रमा लागेको करिब २५ वर्ष भयो होला ।
असावधानी गरे दोहोरीन सक्छ बेल्स पाल्सी
अनुहारको आधा भाग वा मुख बङ्गिने समस्यालाई बेल्स पाल्सी भनिन्छ । बेल्स पाल्सी रोगका बारेमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । फिजियो थेरापिष्ट डा. सृजन तिम्सिनाको बेल्स पाल्सी रोगबाट जोगिने यस्ता उपाय दिएका छन् ।
आठ वर्षपछि खिमनाथले श्रीमतीलाई देख्दा...
न्यूजिल्याण्डकी प्रमद्वारा गर्भवती भएको घोषणा
दोलखाका सबै निजी अस्पताल मापदण्ड विपरीत
बेनी (म्याग्दी), ५ माघ । आठ वर्षअघि आँखाले देख्न छोडेपछि निकै कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका बेनी नगरपालिका–४, सिंगा डाँडाखेतका खिमनाथ शर्मा आठ वर्षपछि आँखा देख्न सक्ने भएका छन् । म्याग्दीमा रहेको लायन्स क्लबको आयोजनामा...
रोल्पा अस्पतालको आधुनिक भवन बन्दै
क्यान्सर परीक्षणमा ठूलो उपलब्धि: वैज्ञानिक
अनुहारको आधा भाग वा मुख बङ्गिने समस्यालाई बेल्स पाल्सी भनिन्छ । बेल्स पाल्सी रोगका बारेमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । फिजियो थेरापिष्ट डा. सृजन तिम्सिनाको बेल्स पाल्सी रोगबाट जोगिने यस्ता उपाय दिएका छन् । बेल्स पाल्सीको...
नर्सिङ पेशा सुधारका लागि मैले नबोले कसले बोल्ने ?
यसकारण जाडोमा बढी हुन्छ हृदयघात
पिसाब चुहिन्छ ? यस्ता छन् उपचारका उपाय
अस्ट्रेलियन फ्लुले बिश्व नै त्रसित ! संक्रमित स्वस्थ युवाहरुको पनि मृत्यु, के हामी तयार छौ?
आङ खस्ने महिलाको पहिचान
दुनै, डोल्पा, ३० पुस । ९ जिल्लामा पहिलो पटक आङ खस्ने महिलाको पहिचान गरिएको छ । वातावरणीय कृषि तथा विकास केन्द्र ९केड०ले तथ्यांक संकलन गर्न शुरु गरेसँगै महिला सशक्तीकरण केन्द्र डोल्पाले साविकका पाँच गाविसभित्र २० प्रतिशत महिला...
भक्तपुरको एउटा नर्स देख्ने नर्सिङ संघले टिकापुरका चारजनाको आँशु देखेन ?
भक्तपुरलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि गन्तव्यस्थल बनाइने
कमोटको सिटभन्दा १७ गुणा बढी फोहोर हुन्छ ब्यागयुक्त चिया !
विवाहपछि यसकारण बढ्छ तौल
नवनियुक्त स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीद्वारा पदभार ग्रहण
नेपालमा मेडिकल पत्रकारिता र चुनौती
मानिसको स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विषयवस्तुसँग नजिक रहेर समाचार तयार गर्ने पत्रकारितालाई मेडिकल पत्रकारिता भन्दा फरक पर्दैन । यसमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चिकित्सक, नर्स, ल्याब टेक्निसियन असिस्टेन्ट, अहेबहरू, अस्पताल,...
स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका खम्बाः सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका
अप्रेशन थिएटरबाटै सामान हराएपछि...
‘सरकार’ मेरो दुर्भाग्य, म डाक्टर बन्न पुगेँ मेरा प्रमाणपत्र किनिदिनुहोस्...
'क्षतिपूर्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति'
प्रा.डा. केसीको समर्थनमा वाचन गरिएको कविता युट्युबमा भाइरल
अदुवामा हुन्छ क्यान्सरसँग लड्ने गुण
अदुवाको प्रयोग प्रायः हामी सबैको घरमा हुन्छ । अदुवालाई विशेषगरी मसलाको रुपमा भान्सामा प्रयोग गरिन्छ । यसमा खानालाई स्वादिलो बनाउने गुण हुन्छ । साथै अदुवामा एन्टीफंगल, एन्टीब्याक्टोरियल र एन्टीभाइरल गुण पनि हुन्छ । यसकारण अदुवालाई...
इन्फ्लुएन्जा फ्लूबारे जानी राखौं
तिलको लड्डु खानुका ९ फाइदाहरु !
'आइओएममा' अध्ययनका लागि अनलाईन फारम खुल्यो
काठमाडौं,७ असोज । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान Institute Of Medicine(IOM) ले शैक्षिक बर्ष २०७४।२०७५ का लागि आंगिक तथा सम्वन्धन प्राप्त क्याम्पसमा स्नातक तह( MBBS,Nursing, BAMS,BPH,BDS,BMLT,B.Pharma,Bsc. MIT,B...
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले माग्यो कर्मचारी
स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो ७५ जना एमबीबीएस डाक्टर
बाध्यतामा इण्डोक्राइनोलोजिष्ट बनेका विशेषज्ञ
फूटबल र क्रिकेटका सौखिन डा. अंशुमाली जोशी पछिल्लो समय मधुमेह उपचारका लागि चलेको नाम हो । कार्डियोलोजी, न्यूरोलोजी वा साइक्याट्रीको डाक्टर बन्ने धुनमा पढाई थालेका डा. जोशीको अगाडी आज इन्डोक्राइनोलोजिष्ट थपिएको छ । इण्डोक्राइनोलोजी अर्थात...
सकारात्मक सोचले जोडिएका डा. सुवास र सम्भा
सरलतामा जीन्दगी खोज्ने मायालु दम्पती
प्रदेश नम्बर ३ को स्वास्थमन्त्रीमा मेरो विकल्प छैन: डा रामकुमार
धादिङ–२ को (क) बाट विजयी एमालेका नेता डा. रामकुमार अधिकारी पब्लिक हेल्थमा पिएचडी गरेका छन् । प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी भएसँगै उनी समाज सेवा र विकासका खाका बनाउन थालेका छन् । महाराजगंज मेडिसिन क्याम्पसबाट जनस्वास्थ्य विषयमा पिएचडी...
‘दबाब आए पनि म सन्तुलित हुनेछु’
नेपालीले खान पनि जानेका छैनन्
‘करी पत्ता’ जसले कोलेस्ट्रोललाई राख्छ नियन्त्रण
करी पत्ताले खानाको स्वाद र बास्ना बढाउँछ भन्ने हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । तर, करी पत्ताले हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो बनाउनमा मद्दत गर्छ यो भने थोरैलाई थाहा होला । जनरल अँफ प्लान्ट फूड्स फर न्यूट्रीशनको एक अध्ययनका...
आयुर्वेद र मधुमेह
हिउँदमा छलाको हेरचाह यसरी गरौं
जाडोमा छालाबढी सुख्खा हुन्छ । त्यसैले छालालाई मोइस्चराइज गर्नुपर्छ । * छाला बढी सुख्खा छ भने ओयल बेस्ड मोइस्चराइजर प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । * प्राय: जाडोमा मोइस्चराइजर प्रयोग गर्न आवश्यक...
यी हुन् चायाँ हटाउने घरेलु पाँच उपाय
पुरुषको छाला सुन्दर बनाउने घरेलु उपाय
बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको फिटनेश फर्मुला
बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले ५ जनवरीमा ३२ औँ जन्मदिन मनाएकी छिन् । कला र सौन्दर्यको जादूमार्फत दीपिकाले हलिउडसम्मको यात्रामा सबैको मनमा स्थान बनाउन सफल भएकी छिन् । तर सुरुको दिनमा दर्शकमाँझ अभिनेत्रीको रुपमा स्थापित हुन आफ्नो...
विश्व सुन्दरी मानुषीको फिटनेस सिक्रेट !
यस्तो छ बलिउड महानायक बच्चनको फिटनेस सिक्रेट !
डब्लिन (आयरल्याण्ड), ५ माघ । आयरल्याडमा मौसमी ज्वरोका कारण २४ व्यक्तिको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरुले बिहीबार जानकारी दिएका छन् । अस्पताल आइ मृत्यु भएका प्रायः सबै व्यक्तिमा ज्वरो नै मृत्युको मूल कारण देखिएको हेल्थ सर्भिस...
जापानमा विषालु फुगु माछा किन्नबाट रोक्न आपतकालिन चेतावनी
देशभर ५० हजार नर्स बेरोजगार
काठमाडौं, ४ माघ । स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेको विभेदविरुद्ध देशभरिका नर्सहरू आन्दोलित छन् । नर्सिङ संघको अगुवाइमा बुधबार काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा नर्सहरूले प्रदर्शन गरे । विभेदविरुद्ध आवाज उठाउँदा सुनुवाइ नभएपछि सडक...
अब विद्यार्थीलाई पिठोको सट्टा पोषणयुक्त चामल
त्रिविका मेडिकल कलेज पत्याएनन् विद्यार्थीले
यौन सम्पर्कबारे अनौठा प्रावधान
एजेन्सी, ५ माघ । जसरी देशैपिच्छे संस्कृति र इतिहास अलग–अलग हुन्छ ठीक उसैगरी देश अनुसार कानून पनि फरक नै हुन्छन् । यौनका विषयमा पनि देशैपिच्छे फरक–फरक कानून रहेको पाउछौं । कतिपय देशमा कानूनले नै खुलेआम यौन सम्बन्ध राख्न...
साइकल चढ्नाले पुरुषहरूको यौन स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्देन–अध्ययन
राशी अनुसार फरक-फरक यौन चाहना
रोमाञ्चक अनुभूतीका लागि बनाउनुहोस् 'सेक्स रुटिन'
विवाहपछि तौल बढ्नुमा सेक्सको दोष छ ?
ईच्छा अनुसार यौन सम्पर्क गरेरपनि किन उदास हुन्छन् महिला ?
हातको यी मुद्राले हटाउँछ तनाव र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या
स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने नेपाली उखानलाई हामी सकेसम्म व्यवहारमा उतार्ने कोशिस गर्छौ । सोही अनुसार स्वस्थ रहन नियमित व्यायामदेखि खानपानमा समेत विशेष सजगता अपनाउँछौं । तर, हाम्रो हातको मुद्राले पनि स्वास्थ्यमा निकै प्रभाव पारिरहेको...
शरीरमा उर्जा दिने ‘हठ योग’
यी हुन् रुघाखोकी र ज्वरो भगाउने योगासन
गर्मीले सतायो ? चन्द्रभेदी प्राणायाम गर्नुहोस्
नर्सका मागमा यस्तो छ सरकारको जवाफ
एकजना नर्सको बिषयलाई लिएर सेवा बन्द गर्नु उचित होइन : स्वास्थ्यमन्त्री बोहरा
आन्दोलनमै भक्कानिइन् नर्स त्रिजनाकी आमा
यस्ता पनि डाक्टर : किरा परेको दाँत नउखेलेर सद्दे दाँत उखेलेर पठाए !
'जुनियर'लाई स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक बनाएको झोकमा डा. पन्तले दिए राजीनामा
किष्ट कर्मचारी आन्दोलनमा व्यवस्थापन मौन
विशिष्ठ व्यक्तिले लगेको उपचार रकम फिर्ता गर्नुपर्छ: गगन थापा
अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीको रोजाइ प्रदेश–३
नर्सको पीडा : सबैले सुन्छन् तर समाधान कसैले गर्दैनन्
शक्तिको आडमा वर्षोदेखि एकैठाउँमा बस्दै विशेषज्ञ चिकित्सक
यस कारण हुन्छ बाँझोपन :डा. नुतन शर्मा स्त्री रोग तथा बाँझोपन विशेषज्ञ
बाङ्गो टिङ्गो दाँत कसरी मिलाउने ? डा विष्णु प्रसाद शर्मा
उमेर बढ्दै जादा किन बढ्छ हड्डी खिइने समस्या ?
ग्यास्ट्रिक बिग्रिए क्यान्सर
यसकारण आवश्यक छ रेडियोलोजी
चिसोमा छाला फुट्छ ? जोगाउने यस्ता छन् विधि
पिनास उपचारमा प्रभावकारी प्राकृतिक उपचार विधि
दाँत सफा गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुहोस्
यसरी थाहा पाउने योनीको क्यान्सर